"အသက် ၂၀ မှာ တစ်ယောက်တည်းနေသင့်သည့် အကြောင်းရင်း (၈) ချက်…" - BaHuThuTaGabar
ကျွန်မတို့ဟာ လူသားတွေ ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝလက်တွဲဖော်ကို မက်မောတောင့်တ ကြပါတယ်။ အချိန်တွေကို အတူကုန်ဆုံးဖို့ အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ဖို့ ရုပ်ရှင် အတူကြည့်ဖို့ ဘဝကို အတူ စွန့်စားဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိနေပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ ချစ်သူ ကောင်လေး သို့ ချစ်သူကောင်မလေးပေါ့ ။
ဒါကြောင့် အတော်များများက Relationship တစ်ခုက်ို လျင်လျင်မြန်မြန် တည်ဆောက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ single အဖြစ်နေထိုင်ခြင်းဟာ ရေရှည်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ထို့အတွက် အကြောင်းရင်း ၈ ချက်ရှိပါတယ်နော် …. ။
အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းကောင်း မသိနိုင်သေးပါဘူး။ အခုမှ လူတစ်ယောက်အဖြစ် စတင်ရုံကာလပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှာဖွေဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ တခြားလူတယောက်၏ လွှမ်းမိုးမှု မပါပဲ ကိုယ် ဘယ်အရာကိုနှစ်သက်တတ်ပြီး ဘယ်အရာကို အမှန်တကယ် မုန်းတီးတတ်သလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။
ဒီနည်းဖြင့် နောက်ပိုင်း Relationship အတွက် ပိုပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး တခြားသူတွေဆီက ကိုယ် ဘာကိုရှာဖွေနေသလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါက များစွာသော ဆိုးရွားတဲ့ Relationship တွေနဲ့ အသည်းကွဲမှုတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ….. ။
အသက်၂၀ တာ ကာလဟာ ပညာရေးကို အာရုံစိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ ဒီအချိန်မှာဆိုရင် အလုပ်ခွင်၊ မိသားစုနဲ့ တခြားတာဝန်ယူစရာတွေ မပိသေးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာမှာ နှစ်မြှပ်နိုင်ရန် အချိန်များစွာရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးမျိုးသောအရာတွေစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
နောက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို စတဲ့နေရာမှာ အကူအညီဖြစ်နိုင်တဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေရော သီအိုရှီဗဟုသုတ ရော ရယူပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းတွေ အလုပ်သင်အလုပ်တွေ မာစတာအတန်းတွေ တက်ပါ။ နောက်ပိုင်း ဘဝမှာ အချိန်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့နော် …. ။
ချစ်သူရည်းစားဆိုတာ ပြတ်သွားပြီးရင် သူစိမ်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်လိုတိုင်း အနားမှာ ရှိနေပေးတဲ့ ကိုယ့်ကို အထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးနေသော သူတွေနဲ့ ပေါင်းပါ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကွန်ရက်ဟာလည်း ယနေ့ခေတ်ရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူများနိုင်သလောက် များများနဲ့ တွေ့ဆုံပါ။ သူတို့က အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ယူဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ် …. ။
ကိုယ့်ရဲ့ အသွင်အပြင် ဖက်ရှင် ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ ဖိုမလက္ခဏာတို့ကို စမ်းသပ်ပါ။ Relationship မရှိတာနဲ့ပဲ သီလရှင်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအစား ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှာဖွေ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်သလဲဆိုတာ ရှာကြည့်ပါ။
ဒါက Relationship တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အလွန်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် လက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေရာမှာလည်း ကြီးစွာ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ ….. ။
Relationship ထားခြင်းက ငွေအကုန်အကျလည်း များပါတယ်။ ညဘက်ထွက်ခြင်းများ ၊ ပီဇာ ၊ ဒိတ်၊ သောက်စရာ တွေ အားလုံးဟာ ငွေ ကုန်စေပြိး လူပါ ဝလာစေပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ရဲ့ ၂၀ ဝန်းကျင်ကာလမှာ ငွေတွေအများကြီး မဖြုန်းချင်ပါဘူး။
ဒါဆို ဘာလို့များ ကိုယ့်အတွက် ပိုက်ဆံမစုပဲ တခြားသူအတွက် ကုန်ကျခံနေမှာလဲ။ ကိုယ့်မိသားစုဘဝ စတင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အတွက် သုံးဖြုန်းခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံက နည်းနေပြီး တခြားတစ်ယောက်အတွက်သာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပိုက်ဆံစုပါ …. ။
ခရီးသွားခြင်းဟာ များစွာသော စီစဉ်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Relationship နဲ့ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကြည့်ရတာကြောင့် ဒါဟာ နှစ်ဆ ပိုခက်ခဲသွားပါတယ်။ ကိုယ်က single ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကိုမှ စိတ်မပူပဲ ကမ္ဘာ ရဲ့ ဘယ်ထောင့် မဆို ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ပဲရစ်ကို လေယာဉ်ပျံနဲ့ သွားမလား ။ စိတ်ပြောင်းသွားလို့ စပိန်ကိုသွားမလား ။ ဘယ်သူကမှ တားလို့ မရပါဘူး။ လမ်းမှာ မိတ်ဆွေအသစ်များစွာကိုလည်း တွေ့နိုင်သေးတယ် …. ။